လက်ဝှေ့သမားများမှာဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိလဲ။ ၃ လထက်နည်းသောလက်ဝှေ့သမားအားမည်သည့်ပြိုင်ပွဲတွင်မဆိုပါဝင်ခွင့်မပြုပါ။ 3rd အမျိုးအစား။ နှစ်စဉ်ပြိုင်ပွဲ ၅ ခုအတွက်အနိုင်ရရန်လိုအပ်သည်။
Chelyabinsk အတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အားကစားရုံ, အေရိုးဗစ်, ကြံ့ခိုင်ရေး + ကျောင်းသားများအတွက်အထူးလျှော့စျေးရှိပါတယ်ဘယ်မှာ
Chelyabinsk ရှိကျောင်းသားများအတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အားကစားရုံ၊ အေရိုးဗစ်၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ + အထူးလျှော့စျေးများကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကခုန်စတူဒီယို "Rai" ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်ခဲ့သောရိုင်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစတူဒီယိုအသစ်သို့သင့်ကိုဖိတ်ကြားရန် ၀ မ်းသာပါသည်။
သင့်ရဲ့ biceps တိုင်းတာဖို့ဘယ်လို? တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်အတွက်? ငါသံဗူးများ၏ကြီးထွားမှုကိုခြေရာခံချင်တယ်။
ဘယ်လို biceps တိုင်းတာသလဲ သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ပြည်နယ်မှာလား ဘူးခွံများကြီးထွားမှုကိုခြေရာခံချင်တယ် အဓိကကတော့အမြဲတမ်းတူညီတဲ့ပြည်နယ်မှာတိုင်းတာဖို့ပဲ။ များသောအားဖြင့်ဤအရာသည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအခြေအနေတွင်ပြုသည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် ...
2 1 reset ဖို့ဘယ်လိုတစ်နေ့လျှင်ကီလိုဂရမ်။ ယခုငါစားရန်အဘယ်အရာကိုစားရန်လိုသလား? ပိုများသောမိုင်အကွာအဝေးအခုအချိန်မှာ 20 မိနစ်
2 ရက် 1 ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးဖို့ဘယ်လို။ အခုငါဘာစားလို့ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ကူညီရန်မိနစ် ၂၀ ခန့်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ )) နိုးထပြီးခန္ဓာကိုယ်မှရေကိုအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားသည်။ မဟုတ်ပါ
ချဲ့ထွင်စက်သည်လက်ဖျံကိုစုပ်ရန်ကူညီသလောသို့မဟုတ်ဒဏ္orာရီလော။ ငါအရိုးအလွန်ပါးလွှာသည်တူညီသောပြproblemနာရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ချဲ့ထွင်ရန်မလို၊ လက်ကောက်ဝတ်ကမတက်နိုင်သော်လည်းပိုဆိုးသည်မှာ ...
နှင်းလျှောစီးအကျီကိုဘယ်လိုလျှော်ရမလဲ။ ဟုတ်ပါသည်၊ သင်၏အကျီကိုအဝတ်လျှော်စက်တွင်ဆေးရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်မလုပ်နိုင်ပါ - အဝတ်လျှော်သည့်အခါအ ၀ တ်လျှော်အမှုန့်များလျော့ပါကအပေါက်များပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အရောင်ချွတ်ဆေးထည့်လျှင်ပါးလွှာပါလိမ့်မည်။
နှင့်အကွာအဝေး 500 မီတာ Sprint ပါသလဲ သို့မဟုတ်ပဲ 400 သလော
မီတာ 500 Sprint လား ဒါမှမဟုတ် ၄၀၀ အထိလား။ Sprint သည်အားကစားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ အားကစားသမားများသည်အားကစားကွင်းတစ်လျှောက်ပြေး (ပြေးနှုန်း) တွင်အားကစားသမားများယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ အကွာအဝေးအရှည် ...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ ၁။ အထက်ခန်း၏ရင်ဘတ်နှင့်ခေါင်း၏နောက်ကျောအားကစားရုံ၌အထူးအားကစားရုံတစ်ခုရှိပါက ၃-၄ ရက်အကြာတွင် ၁၂ ကြိမ်စီ ၃ စုံပါ ၀ င်သည်။
creatine ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ! လူတိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းရှိသည် - လူတစ် ဦး သည်သူကိုယ်တိုင်၏အမှားအတွက်အမှားများကိုကိုယ်ခန္ဓာ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းပါစေ!)))) တစ်ခါတစ်ရံကြွက်တက်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း ... အလေးချိန်၊ အစွမ်း၊ ခံနိုင်ရည်))) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသတိမပြုမိပါ။
glutamine ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်စားတာလဲ။ Glutamine သည်ပရိုတိန်းတွင်တွေ့ရသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီးကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တိုတိုပြောရရင်သူတို့စားနိုင်အောင်စားတယ် ...
ကအားကစားသမားနှလုံး volume ထဲမှာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အရာကြွင်းသမျှမှာဤအကြောင်းကြောင့်နှေးသူတို့အား pulse မှန်ပါသလား?
အားကစားသမားတွေဟာနှလုံးကြီးကြီးလာပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးကွေးနေတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားနှလုံးအရွယ်အစားနှင့် tachycardia တစ်ခုတိုးလာရှိသည်, ဤသည် ...
သေလွန်သောသူတို့သည်နှင့် deadlifts မဟုတ်ထို့နောက်ခြားနားချက်ကဘာလဲလျှင်အတူတူပင်များမှာ!
မသေလျှင်မသေသေသေသေသေခမရှိပါလျှင်မကွာပါကအဘယ်အရာရှိပါသနည်း။ အဓိကဆွဲဆောင်နိုင်သောအမျိုးအစား ၂ ခုရှိသည်။ ဂန္ထဝင်သေတ္တာကိုကျဉ်းမြောင်းသောခြေထောက်များဖြင့်ပြုလုပ်သည် (လက်တွေ့ကျကျ ...
အဘယ်အရာကိုဝမ်းဗိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်, သငျသညျအဘယျ Simulator မြားအပေါ်လေ့ကျင့်သင့်သလဲ ဝမ်းဗိုက်ကွဲပြားခြားနား: အားနည်းသောဝမ်းဗိုက်နံရံ - ထို့နောက်ဝမ်းဗိုက် sternum မှစတင်သည်။ ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာအဆီထူ (ကြွက်သားများပင်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်) ဖြစ်သည်။
1 လသေဖို့သတင်းစာတည်ဆောက်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? လူကို
1 လအတွင်း ABS တည်ဆောက်ပုံ? လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ http://www.greathome.tk/ တွင်အရာအားလုံးအလွန်ကောင်းပြီးရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောကောင်းမွန်သော site တစ်ခုကြည့်ပါ။ ငါကိုယ်တိုင်အစီအစဉ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလေ့လာနေတယ်။
အားကစားသမားတွေအတွက်မေးခွန်းကိုဘယ်လိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်မလဲကာယဗလလေ့ကျင့်သူတော်တော်များများအတွက်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အမှားတစ်ခုကတော့ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလျင်မြန်စွာသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံလျှော့ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုမတိုင်မီအစွန်းရောက်အစားအစာဖြစ်ပါတယ် ...
သတင်းစာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, အသက်ရှူနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ N.
စာနယ်ဇင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုတင်ရမလဲ။ အသက်ရှူခြင်း၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အားရှူရှိုက်မိခြင်း၊ အညီအမျှအသက်ရှူ။ ပခုံးဓါးများမတက်မှီသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုမြှင့်ပါ။
စက်ဘီးကွင်းဆက်ကိုအဆီချနိုင်ပုံ ဖိုက်လိုအပ်သည် ဒါပေမယ့်အမှိုက်နဲ့အခြားအရာတွေအကြောင်းဒါကြောင့်အထည်ဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုဗီယက်လမ်းအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင်ကွင်းဆက်ကိုချွတ်ပြီးမည်သည့်စက်ကိုမဆိုစုပ်ယူနိုင်သည်။
ကီထိုင်ခြင်းကဘာကိုပေးသလဲ။ တုံ့ပြန်မှုမှ +5၊ စိုက်ထူခြင်းသို့ရောက်သည် +20 ကီထိုင်ကီများသည် g * py ၏ကြွက်သားများကိုတိုးတက်စေသည်။ ဘယ်လောက်ကီထိုင်မ, မြည်းပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းမည်မျှ (ကောင်းစွာ, ကီထိုင်ဖြစ်ကောင်းလည်းတင်ပါးလှုပ်) သည် ...
ironman ကောင်းသောပရိုတိန်းပါသလား သွေးရည်ကြည်
သံဓာတ်ပရိုတင်းသည်ကောင်းပါသလား။ whey Excellent ကပရိုတိန်း။ Nikita ကိုကျွန်တော်သဘောတူသည်။ ပရိုတိန်းများစွာသည်ကျွန်ုပ်၏အစာအိမ်ကိုတကယ့်ကိုလှည့်စားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလုံးကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ် ...
နည်းဗျူဟာ ၁။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲပြီးဒူးကိုညာဘက်ထောင့်ကွေးပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာခြေထောက်နားနေတယ်။ သင်၏လက်များကိုသင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်တင်ထားပြီး ၂။ မျက်နှာကြက်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ၃ ။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 13 Next ကို 's Page
59 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,789 စက္ကန့်ကျော် Generate ။